Fianakaviana Goatemalteka: Doña Maria · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Oktobra 2017 3:38 GMT
(Marihina fa tamin'ny 14 Novambra 2006 no nanoratana ny lahatsoratra teny anglisy)
Doña Maria nataon'i James Rodriguez
Mipetraka am-pireharehana ao an-dakoziany i Doña Maria, fianakaviana matriarka araka ny hita eo amin'ny huipil (akanjo misy petakofehy) fotsy .
Iray amin'ireo mpianakavy avy amin'ny vondrom-piarahamonina Maya Ixil any amin'ny faritra avo any Goatemalà izay nasongadina tao amin'ny sary fanadihadiana vao haingana nataon'i Rodriguez i Doña Maria. Tao amin'ny pejin'ny pikantsariny Flickr:
Nandritra ny ady an-trano nandravarava nandritra ny 36 taona izay niaretan'i Guatemala nanomboka tamin'ny taona 1960 ka hatramin'ny taona 1996, niaritra ady nahatsiravina indrindra angamba ny olona avy ao amin'ilay antsoina hoe telolafy Ixil . Famonoan'olona am-polony maro nifanesy no namotika ny faritra ary olona an'arivony no nafindra toerana anatiny ary niely nanerana ny sisintanin'i Meksika ny olona sasany.
Ankehitriny, folo taona taorian'ny nanaovana sonia ny fifanekena momba ny fandriampahalemana nataon'ny governemanta sy ny vondrona mpiady anaty akata dia miezaka mandroso amin'ny fanarenana ny fandaharan'asa izay napetraky ny fifanarahana i Nebaj tahaka ny ankamaroan'ny faritra hafa ao Guatemala. Indrisy anefa fa misy ireo izay mahazo tombontsoa amin'ny fanakanana ny fanatsarana toy izany.
Nahazo fandrahonana mivantana avy amin'ny olona tsy mitonona anarana noho ny fandraisany anjara tamin'ny fanentanana mitady fanavaozana ara-tsosialy ity fianakaviana Ixil manaraka ity.
Entanina mba hanaraka ny tranonkalan'ny bilaogy Guatemala Solidarity Network ireo mpamaky liana amin'ny fampafantarana bebe kokoa momba ny Fifanarahana Momba ny Fandriampahalemana tao Guatemala .